Accueil > Gazetin'ny nosy > Madagasikara: FSAM: Mazava ny tetika sy tanjon’i Jimmy Rakotofiringa
Madagasikara: FSAM: Mazava ny tetika sy tanjon’i Jimmy Rakotofiringa
Ny tsikaritra aloha dia vola “euros” amin’ny arivony, avy any amin’ny FIA («Fédération internationale de l’automobile») izay manampy be dia be ara-bola sy fitaovana ary fiofanana ny FSAM, no tsy fantatra izay nalehany. Ary tsy afaka manome fanazavana tena mazava ingahy Jimmy fa tonga dia sazy ihany, sazy hatrany. Izao indray dia mandany fotoana nefa ny atao rehetra tsy misy mitombona fa vao mainka aza manaratsy ny fomba fitantanany. Jereo fotsiny ny tranga tetsy Mahamasina tafiditra tamin’ny RIM faha-38 («Rallye international de Madagascar» izay tsy nisy vahiny na ny iray aza): mbola tsy nisy mihitsy izany hoe valina «rallye» ka tsy mivoaka eo no eo, fa mbola miatrika… tribonaly dia ny TAS ihany. Ka hatramin’ny oviana ingahy Jimmy le Chinois no hiodinkodina eo satria ny fotoana anie tsy mamafa velively ny heloka vita e! Sao dia tsy ho zaka atsy ho atsy izany enta-mavesatra izany leiroa a! Marina moa.